CiidamadaTurkiga ee ku sugan dalka Afghanistan oo mudo kordhin loo sameeyay. – SBC
CiidamadaTurkiga ee ku sugan dalka Afghanistan oo mudo kordhin loo sameeyay.
Istanbul:- Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga Xukuumadda Turkiga ayaa muddo kordhin waxa ay u sameesay Ciidamada nabad ilaalinta Turkiga ee ku sugan magaaladaKabul, kuwaasi oo qeyb ka ah isbahaysga NATO ee dagaalka kula jira dhaqdhaqaaqyada ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada shisheeye ee dalkaAfghanistan.
Xukuumadda turkiga ayaa hal sano oo dheeraad ah ugu dartay ciidamadeeda ku sugan dalkaAfghanistantaasi oo kadhigan in ay sii joogi doonaan dalkaAfghanistanilamaa November 2012.
Ciidanka Turkiga ayaa qeyb ka qaata tababarka amaanka dalkaAfghanistansi amaan iyo degnaansho loogu soo dabaalo dalkaAfghanistan.
Sidoo kale dowladda turkiga ayaa ah dalka keliya ee Muslimka ah ee xubin ka ah isbahaysiga reer galbeedka islmarkaana leh ciidanka labaad ee ugu tirada badan ee xilligan ku sugan dalkaAfghanistankuwaasi oo gaaraya 1800 oo askari.
Ciidanka turkiga ayaa shaqadoodu ku kooban tahay roondooyinka islamarkaana ciidanka trukigu kama qeyb galaan howlgalada milatari ee dalkaAfghanistantaasi oo ah mid ka duwan dalalka kale ee ciidamada ka joogaan dalkaAfghanistan.
Dhanka kale afti laga qaaday muwaadiniintaBritainayaa muujinaysa in muwaadiniintaBritainay doonayaan in si deg deg ah ciidamadaBritainlooga soo saaro dalkaAfghanistan.